Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Meghan Markle – Atariishada garoobka ah ee Africa xididka ku leh taasoo uu alkuntay Prince Henry! | Filimside.net
Home » Hollywood News » Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Meghan Markle – Atariishada garoobka ah ee Africa xididka ku leh taasoo uu alkuntay Prince Henry!
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Meghan Markle – Atariishada garoobka ah ee Africa xididka ku leh taasoo uu alkuntay Prince Henry!
Atariishada u dhalatay Mareykanka Rachel Meghan Markle ayaa waxay aqbashay inuu alkunto Prince Henry oo ah dhaxal-sugaha Boqortooyada Wales. Waana alkun yimid ka dib muddo hal sanno ah oo ay labadoodu wadaagayeen xiriir jaceyl.
Xaflad aroos boqortooyo ah middii ugu sarreysay ayaa loogu qaban doonaa aqalka Windsor Castle sannadka soo aadan 2018ka. Prince Harry oo ay warbaahintu xogtiisa xiiseyso maadaama uu yahay shaqsi jecel nolosha damaashaadka ah ayaana wuxuu haatan guursaday garoob caan ah Meghan Markle.
12 xaqiiqo oo ku saabsan nolosha atariishadaan Meghan Markle oo 36 sanno jir ah.
Meghan Markle ayaa haweeneyda macluumaadkeeda loogu raadinta badan yahay adduunka, sida ay shabakadda Google daaha ka qaaday.
Waxay ku dhalatay Los Angeles, California markii ay ku beegneyd August 4, 1981.
Hooyada dhashay Meghan waxaa lagu magacaabaa Doria Raglan, waxay asal ahaan kasoo jeedaa Africa laakiin dhalashada Mareykanka ayey heysataa, waa dhakhtar maskaxda ah, sidoo kale waxay leedahay shirkad sameysa lebiska jimicsiga ee dumarka.
Aabaheed waa Thomas Markle waa naqshadeeye iftiinka goobaha aflaanta lagu dhigo ah (Lighting director) wuxuuna ku qaatay abaalmarinta Emmy.
Meghan Markle ayaa Xirfadda Jilliinka iyo Xiriirka Caalamiga ah (International relations) kasoo baratay jaamacadda Northwestern University ee ku dhow Chicago.
Intii ay ku jirtay tijaabooyinka jilliinka, Meghan Markle ayaa waxay naqshadeyn jirtay kaararka xafladaha arooska, illaa hadana waa ay naqshadeysaa.
Gabadhaani waxay doorar yar ku yeelatay musasallada CSI: New York, General Hospital, 90210, ka hor inta aysan hawada ku gelin musasalkii Deal or No Deal.
Meghan ayaa sannadkii 2011kii ugu dambeyn heshay filim ay hogaamiye ka tahay waana doorkii Rachel Zane ee filimkii Suits.
Producer-ka Hollywood-ka Trevor Engelson ayey horay usoo guursatay kaasoo ay isbarteen sannadkii 2004tii waxayna guursatay 2011kii, ka hor inta aysan kala tegin sannadkii 2013kii.
Meghan waxay sidoo kale xoghaye kasoo nooqtay mashruuc dadka waxheysta loogu baaqayo inay kaalmeeyaan dadka dhibaateysan. Sidoo kale qareen ahaan ayey ugu soo shaqeysay ururka United Nations Women.
Markii ugu horreysay ee ay la kulantay Prince Harry waxaa baray saaxiibkeeda ay ku dhaarato Markus Anderson sannadkii 2016kii, wixii intaas ka dambeeyey xiriirkooda ayaa heer sarre gaaray illaa ay isguursadaan.
Wadar ahaan labadoodu waxay heystaan adduun lacageed dhan 45 milyan oo dollars, sida baaritaan la sameeyey daaha looga qaaday.
Waxaa Aqrisay 1,254